Dare iri rinoti rinofunga kuti vanhu vane kodzero yekupinda mumapoka avanoda, uye kuratidza zvavanofunga murunyararo, uye kukurudzira kuti hurumende imire kunangana nevatungamiri pamwe nenhengo dzesangano revashandi reZCTU.
Dare re European Union iri riri kukurudzirawo kuburitswa muhusungwa kwevanhu vakasungirwa zvematongerwo enyika.
Dare iri riri kukurudzirawo mizinda yenhengo dzaro muZimbabwe kuti irambe ichitevera zviri kuitika munyika, uye kushandisa mikana yose kubatsira vanorwira kodzero dzevanhu.
Panyaya yezvirango, paramende iyi iri kukurudzira kuti European Council itarisire zvakare zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani ehurumende, kusanganisira avo vakambobvisirwa zvirango izvi, senzira yekutsvaga chokwadi chemhirizhonga yakakonzerwa nehurumende.
Dare iri riri kukurudzirawo masangano eSADC neAfrican Union kuti ape rubatsiro ku Zimbabwe kuitira kuti igadzirise matambudziko ayakatarisana nawo.
Gwaro iri rakabuda musi uyo mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakasangana muHarare nevamiriri vedzimwe nyika vakavaudza kuti kuti Zimbabwe ibudirire panoda kubatana mukuvandudzwa kwehupfumi kwairi kuita zvichitsigirwawo neshanduko mune zvematongerwo enyika.
VaMnangagwa vakatorawo mukana uyu kukumbira zvakare kupasi rose kuti rivimbe neZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga vanoti gwaro iri rabaya dede nemumukanwa uye zvinonyadzisa kuti Zimbabwe iwudzwe nezvekodzero dzevanhu vayo nevekunze.